Mbappe Mise Haaland? Real Madrid Oo Go’aan Ka Gaartey
Cid waliba waxay tilmaan kasii biixinaysaa sida ay Real Madrid isku beddeli doonto sannadka 2021 iyadoo lala xidhiidhinayo xiddigo waaweyn oo magac leh oo iman duuna, isbeddel dhinac walba leh oo laga sugayo iyo xattaa garoonkooda Santiago Bernabeu oo isbeddelaya oo dibu dhis lagu sameeyey.
Ciyaaryahanadda la hadal hayo inay hoggaamin doonaan xili ciyaareedka dambe oo ay iman doonaan Santiago Bernabeu xagaaga 2021, waxa ka mid ah Kylian Mbappe iyo Erling Haaland oo afka hore ee weerarka, kuwaas oo la sugayey inay go’aan ka gaadhaan midka ay lasoo saxeexan doonaan maadaama ay adag tahay in labadooda hal mar lala soo wada wareego oo ay lacag badan ku kacayso.
Mbappe ayaa mar walba u muuqday inuu yahay laacibka ka ciyaari doona Santiago Bernabeu, waxaanu riyadiisa caddeeyey markii uu garoonkaas booqday iyadoo ay da’diisu yarayd oo uu sawirro kula soo galay Cristiano Ronaldo, sidoo kalena uu garoonka tababarka ugu tegay Zinedine Zidane oo mar walba ah qofka uu kaga daydo waxyaabo badan oo kubadda cagta. Laakiin soo bixitaanka Haaland ee goolasha tirada badan ee layaabka leh dhaliyey xilli ciyaareedkii hore ayay Real Madrid la dhacday, waxaana uu kalsooni ka helay maamulka oo u arka inay ku jirto intii ay tabayeen ee gool-dhalintu.
Wargeyska Marca oo warbixintan qoray ayaa waxa uu isweydiiyey su’aal ah, waa midkee ciyaartoyga ay Real Madrid go’aaminayso inay xagaaga dambe lasoo saxeexato? Kaddib xili suuq u dhamaaday Real Madrid iyadoon wax ciyaartooyo ah lasoo saxeexan, sidii looga bartayna aanu laacib weyn imanin caasimadda Spain.
Kylian Mbappe ayaa ah ciyaartoyga koowaad ee ay Real Madrid doonaysay inay lasoo wareegto, laakiin Haaland ayaa ah No.9 dhab ah oo dhalin karaya goolasha ay u baahan yihiin, waxaanay kooxda go’aankeedu yahay in labadoodaba ay lasoo wada wareegaan, sida uu qoray wargeyska Marca.
Warbixintu waxay intaa ku dartay in Erling Haaland uu yahay ciyaartoy qiime ahaan uga jaban Mbappe, mid kale oo u fududaynaysa inay lasoo saxeexdaanna ay tahay Martin Odegaard oo ay saaxiibo yihiin.
Los Blancos waxay ka fikiraysaa in Borussia Dortmund ay siiyaan Luka Jovic oo uu qayb ka noqdo heshiiska ay kula soo wareegayaan Haaland.
Si kastaba, Zinedine Zidane haddii uu isla helo Erling Haaland iyo Kylian Mbappe, waxa hubaal ah in Los Blancos ay dib u helayso xiddigihii ‘Glacticos’ oo ay abuuraan xiddigo la mid ah sidii Ronaldo Nazario, Zidane, Beckham, Figo, Carlos, Nistelrooy iyo kuwo kale.
Abdiwahab Ahmed 189 posts
40 Meals Medical doctors Need Ladies Over 40 to Eat
Bruno Fernandes Iyo Xiddigaha Waaweyn Ee Manchester United